फोपीमा रिलिज भयो एश्वर्य
रमेश उप्रेतीको चलचित्र एश्वर्य आज शुक्रवारको दिन फोपीमा रिलिज हुने भएको छ। बिगत १० महिना यता दुई दर्जन जति चलचित्र रिलिज भै सकेको र विश्वभरी यसरी नेपाली चलचित्रको बजार बिस्तार भैरहेको जानकारि फोपीले दिएको छ । तीन लाख भन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको यस एपमा नयाँ नया नेपाली चलचित्रहरु प्रदर्शन गर्ने गरिएको छ।
गत वर्ष कार्तिक ९ गते हलमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र एश्वर्यले हलमा पनि राम्रो व्यपार गर्न सफल भएको थियो। प्रेमकथामा आधारित द्वन्द्वात्मक कथानक चलचित्र एश्वर्यले पहिलो पटक विश्वभरि एकै पटक डिजिटल रिलिज गर्नलागेको जानकारी दिएको छ। यो चलचित्रमा रमेश उप्रेती, दिपिका प्रसाई, प्रशान्त ताम्राकार र केकि अधिकारी मुख्य भुमिकामा छ्न। वैशणौ देवि फिल्मसको व्यानरमा दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रलाई अर्जुन श्रेष्ठ र किरण उप्रेतीले निर्माण गरेका हुन। रमेश उप्रेतीको कम्ब्याक मानिएको यस चलचित्रले प्रदर्शनमा एकदमै राम्रो प्रशंसा बटुल्न सफल भएको थियो।
फोपीमा विश्वको प्राय जसो देशबाट आफ्नै मोबाइलमा जुनसुकै ठाउँबाट नेपाली चलचित्रहरु हेर्न सकिन्छ। हरेक चलचित्र हेर्दा ग्रहाकले केही रमक तिर्नु पर्ने छ। नेपालमा यसरी चलचित्र हेर्दा रु ३० वा रु ५० तिर्नु पर्ने छ। यसरी चलचित्र हेर्न आफ्नो मोबाइलमा नेपाल टेलिकम वा एनसेलको व्यालेस वा खल्ती वा इसेवाबाट पैसा तिर्न सकिने छ। यसका अलावा भारतमा पेटिएम, मलेसियामा कार्ड वा सेभेन इलेभेन र अन्य देशहरुमा बैकंको कार्डबाट चलचित्र खरिद गर्न सकिन्छ। यसरी प्रदर्शन गरिएको चलचित्रबापत डिजिटल राईट्स ओनरहरुले पैसा पाउने गरेका छ्न। यस एपका संस्थापक अध्यक्ष प्रशान्त राज कार्कीका अनुसार पाइरेसी रोक्न र उचितरुपमा सर्जकहरुलाई आम्दानी दिलाउने उदेश्य यस एपको रहेको छ। आफुहरुले नेपाली चलचित्रलाई विश्वबजारमा लैजान कटिबद्ध रहेको र चाडै नै मध्य एसियाका केही देशमा एप रिलिज गर्ने जानकारी कार्कीले दिएका छन। यो एप अहिले प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ।
यसता एपहरुले नेपाली चलचित्रको डिजिटल युग प्रारम्भ गरेको छ र नेपाली चलचित्रको विश्वबजारीकरण र व्यवसायीक्तामा मनग्य टेवा पुर्याएको छ।
Foranation like us, it is even tough to find the right match forastartup. Practically, what we actually came to know is, HR these days is also about managing the perception of people. People have started perceiving their job responsibi…
Yes the change is inevitable and we have taken our first step towards the change and …